प्रत्येक वर्ष किराँत राई समुदायले मनाउने उँभौली पर्व आज देशभर भूमेस्थानमा पूजा आराधना गरी मनाइँदै छ । बाली लगाउनुअघि गाउँगाउँमा रहेका भूमेस्थानमा राम्र...
प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्धजयन्ती पर्व आज भगवान् विष्णुको नवौँ अवतारका रुपमा जन्म लिनुभएका सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि प...
किराँत राई समुदायको साकेला उभौली, हिन्दूधर्मावलम्बीको देवालीलगायत विभिन्न जातजातिको चाडवाडमा यसपटक विगतको जस्तो भीडभाड हुने छैन । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले जिल्लामा साक...
कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण बिरामीको मृत्यु भयो भने मृतकको शव परिवार र आफन्तले पाउने छैनन् । कोरोना रोगले मृत्यु भएको शवलाई दाहसंस्कार त के छोएर रुन समेत पाइन्न । ६ फिट टाढाबाट नै मृतकको मुख हेरर मात्र ...
लकडाउनमा 'श्री कृष्णा' को पुन:प्रसारण गरिंदै, कहिले आउँछ टिभीमा ?
भारतीय टिभी च्यानलले टेलीसिरियल श्री कृष्णाको पुनः प्रसारण गर्ने भएको छ । लकडाउनका समयमा दर्शकहरूलाई सहज होस् भन्ने लक्ष्यसहित सो टेलीसिरियलको पुनः प्...
श्रीमद्भागवत पुराण हिन्दू धर्मको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ग्रन्थ मध्ये एक हो । यस ग्रन्थको रचना आजभन्दा लगभग ५ हजार वर्ष पहिला गरिएको थियो । तर आश्चर्य लाग्दो कुरा...
नेपालगञ्जका मुसलमान समुदायले शनिवारदेखि शुरू भएको पवित्र पर्व रमजानको रोजामा कोरोना भाइसर समाप्तिको प्रार्थना गरेको छ । रोजाका बेला मस्जिदमा गएर नमाज प...
न्दू धर्ममा निधारमा टीका लगाउने परम्परा हुन्छ । कुनै पनि शुभकार्य, पूजा तथा मन्दिरमा भगवानको दर्शन गरेपछि निधारमा टीका लगाइन्छ । निधारमा टीका लगाउनुको पछाड...
‘ट्वाइलेट’ गर्ने पश्चिमी शैलीको समस्या कोरोनाले गर्‍यो उजागर, आचार–व्यवहारमा गम्भीर प्रश्न
कोरोनाभाइरस महाव्याधि फैलिएसँगै पश्चिममा प्रचलित व्यवहारका विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । अहिले सामाजिक तथा शारीरिक दूरी कायम गर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा एक...
सोमवारदेखि विक्रम संवतको नयाँ वर्ष २०७७ साल शुरु भएको छ। तपाईंको २०७७ सालभरको राशिफल कस्तो छ ? प्रख्यात ज्योतिषी ओजराज उपाध्याय लोहनीले यस वर्षभरको रा...
वनमा केही कुरा गर्नैपर्ने हुन्छन् । यस्ता कुरा गर्न धेरै बेर लाग्दैन तर तपाईंलाई दिनदिनै गर्नुपर्दा झ्याउ चाहिँ लाग्न सक्छ । तर यहाँ बताउन लागिएको दुई मिनेटको ...
ज्योतिष शास्त्र भन्छ– शनिवार यी चिज खाँदा शनिदेव रिसाउँछन्, पुग्छ हानी
शनिवारको दिन शनिदेको दिन हो । शनिदेवलाई न्यायका देवताको रुपमा हिन्दू धर्म दर्शनमा व्याख्या गरिएको छ । शनिदेवलाई प्रसन्न गर्नका लागि यो दिन सरसिउको ...
आचार्य चाणक्यको नीति वर्तमान जीवनमा पनि प्रासंगिक मानिन्छ । यदि कसैले आफ्नो जीवनमा चाणक्य नीतिको पालना गर्छ भने उसले सामाजिक जीवनसँग जोडिएको हरेक चुनौती...
चाणक्य एक योग्य शिक्षक थिए । उनी राम्रा सल्लाहकार पनि थिए । धेरैले उनलाई अर्थशास्त्रका रचयीता पनि भन्ने गर्दछन् । जीवन र समाजको हरेक पक्षमा आचार्य चाणक्यले प्र...
शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त गर्नका लागि वास्तुशास्त्रमा अनेकौं उपाय सुझाइएका छन् । यीमध्ये यहाँ दिइएका आठ उपाय अपनाए मात्र पनि तपाईंको भाग्य चम्किन्छ । प...
राशिअनुसार व्यक्तिहरुको स्वभाव फरक हुन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर कुन राशी भएका व्यक्तिको स्वाभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जान्न हामी सबै उत्...